Tsy vesatra ho an'ny fiaraha-monina akory ireo olona manana kilema ireo.
Omeo azy ireo ohatra ny fanaovana ny Sainam-pirenena, aza misy avela hanao izany asa saro-pady izany ny mpanjaitra izay maro ny tsy manaja akory ny fenitra momba ny Sainam-pirenena, mbetika, maitso tanora, mbetika maitso antitra, mbetika misy kiramborambo, ao aza moa no tsy manaja refy.
Omeo azy ireo, na ny jamba, moana, marenina, na olona manana kilema, ny fanaovana ny ankanjon'ny miaramila, ny tablier zaraina sy ireny kitapo kit scolaire ireny, maninona isika miala vola amoronana asa any Chine, ka any no manafatra zavatra vita eto, nefa azo anomezana asa ireny olona manana kilema ireny.
Esory ny hetra na IRSA ho an'izay orin'asa mampiasa ireo olona manana kilema ireo, afaka manao phoning, na call center ireo, ny asa informatique, ny standard téléphonique, asio toerana fanofanana. Tsy mihoatra ny 10% n'ny Malagasy ireo olona manana kilema ireo, ary mampalahelo fa dia tratran'ny kilema indroa, satria efa voa ny vatana, nefa mbola lasa mpangataka sy mahantra ihany koa.
Tandremo ny fiantsoana azy ireo, aza atao hoe "kilemaina", fa "olona manana kilema". Personne handicapée, fa tsy "les handicapées", olombelona izy ireo.
Asio ilay fandikan-teny ho an'ny olona marenina, ny télévision. Ny TVM aloha manao ihany amin'ny vaovao, fa mbola mila ezaka amin'ireny andro lehibe sy lanonam-panjakana ireny.
Tsy mangataka na mila fihantrana, na fitserana, fa mila omena ny zo mifanaraka amin'ny vatany.
Ny Tanàna izany tokony hiezaka anisy ireny lalana ahafahan'izy ireo mandeha, ny faritra fiampitana, ireny repère ireny. Ny WC mifanaraka aminy, ny parking ho azy ireny, ny fidirana ny birao, rampe, ny haben'ny varavarana...